IMIPHEZULU YEETAFILE ZEKHITSHI ZANGAPHANDLE (IIYILO EZIDUMILEYO) - IINDAWO ZOKUPHILA NGAPHANDLE
Eyona iindawo Zokuphila Ngaphandle Imiphezulu yeetafile zekhitshi zangaphandle (iiYilo eziDumileyo)
Imiphezulu yeetafile zekhitshi zangaphandle (iiYilo eziDumileyo)
Wamkelekile kwigalari yethu yeetafile zekhitshi zangaphandle apho sigubungela iindidi zezinto ezithandwayo kwaye sabelana ngemibono yoyilo ngenkuthazo.
Ikhitshi elingaphandle lilongezo elikhulu kulo naliphi na ikhaya. Ukulungiselela isidlo kunye yeyona ndlela ilungileyo yokunxulumana kunye nokonwabisa kunye nekhitshi langaphandle likuvumela ukuba wenze njalo ngelixa wonwabela umoya omtsha.
Inxalenye ebalulekileyo yekhitshi ziindawo zokubala. Imiphezulu yeetafile zikwindawo zomsebenzi kwaye ziyimfuneko ukulungiselela ukutya. Xa usakha ikhitshi elingaphandle, kubalulekile ukuba ukhethe izinto ezisemgangathweni zokubala ukuze zisetyenziswe lula, zomelele kwaye zinomtsalane.
I-Countertop egqibeleleyo yekhitshi yangaphandle
Yangaphandle Kitchen Granite imiphezulu yeetafile
Yangaphandle Ikhitshi Tile usule
Ikhitshi eliphathekayo lekhonkrithi yangaphandle
Yangaphandle Umthi usule
Imiphezulu yeetafile zangaphandle zwi
Amacwecwe angaphandle eSepha
Imiphezulu yeetafile Stainless Stainless
Iingcamango zekhitshi yangaphandle yeKhitshi
Ekubeni i-countertop yekhitshi yindawo yokusebenzela, kufuneka ukhethe izinto ezizinzileyo ezilula ukuzicoca. Ukwafuna umbandela onganyangekiyo kubushushu - njengoko amathuba elungile uya kugqiba ubeke ipani eshushu okanye imbiza ngaphezulu njengoko upheka.
Xa kuziwa kwi-countertop efanelekileyo ikhitshi elingaphandle , enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo iya kuba yindlela izinto eziza kuhlala ngayo ngokuchasene nemozulu. Imiphezulu yeetafile yekhitshi elingaphandle iya kutyhileka kwizinto kwaye awufuni nto eza kubuna ngokulula elangeni okanye kwi-warp ngenxa yokufuma.
Iindidi zee-countertops zangaphandle ezibonelela ngexabiso elifanelekileyo lokuhlala zi-granite, ithayile kunye nekhonkrithi.
I-Granite yinto efanelekileyo yokusebenzisa i-top top counter counter ngenxa yokuba yomelele. Iyakwazi ukuma kwizinto ezingapheliyo kwaye ayiyi kutshabalalisa okanye idibanise xa ichanekile elangeni okanye emvula. Ngethuba nje uyitywina ukukhusela imozulu, a Umgangatho wokuphakama wegranite lukhetho olufanelekileyo kwikhitshi elingaphandle.
I-Granite inzima ukonakalisa, ayizukukrwela okanye ichip, kwaye kulula ukuyicoca. Unokuyifumana kwiindidi zemibala kunye noburhabaxa. Eyona ngxaki yokwenyani ngegranite kukuba ukuyifaka kunokuba kubiza, ke ukuba uhlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo unokufuna ukuqwalasela enye yeendlela ezizezinye ezingezantsi.
Ithayile inokuba lukhetho olunemibala kunye noyilo lwetheyibhile yangaphandle yekhitshi. Unokude uzibeke kwipatter enomtsalane kuyilo oluyinyani lwasekhitshini.
Ukungancedi kwitafile yethayile yangaphandle yasekhitshini iithayile azomelelanga njengokutsho kwezinto ezinzima njengegranite. Ithayile inokuqhekeka kunye ne-chip kwaye oku kunokubuthintela kubuhle betafile yakho. Kukho ingxaki yokuguqulwa kombala, xa iithayile zifakwe ngaphandle ezi zinokungcola emva koko kufakelo lwangaphakathi.
Ngethamsanqa, ukubuyisela ithayile okanye ezimbini kuyiprojekhthi elula ye-DIY. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukufumana iithayile ezifanayo. Kule meko, kunokuba ngumbono olungileyo ukuthenga nokugcina iithayile ezongezelelweyo kolu hlobo lwesimo.
Ufanele uthandane ixesha elingakanani ngaphambi kokuganana
Izibonelelo zokuba nekhabhathi yekhonkrithi yangaphandle ekhitshini kukuba ikhonkrithi yinto eyomeleleyo ekwaziyo ukumelana nezinto. Ukungancedi kukuba umbala unokuphela xa uvezwe elangeni kwaye uphele ujongeka ungonwabanga. Ukuthintela ukujika kombala kunye nokuchitheka kokuchitheka kufuneka kucocwe ngokukhawuleza kwaye umphezulu kufuneka utywinwe rhoqo ukugcina umgangatho wawo. Funda ngakumbi malunga imiphezulu yeetafile yekhonkrithi yangaphandle Apha.
Iinkuni zizinto ezintle kwitafile yokuphamba, nangona kunjalo imiphezulu yeetafile yomthi ingaphezulu kakhulu.
Ukuba uthatha isigqibo sokuba imibala efudumeleyo kunye neepatheni ezizodwa ze imiphezulu yeetafile iinkuni Ufanele umzamo wesondlo, nantsi into ekufuneka uyikhumbule:
Faka ioyile yebakala lokutya rhoqo kumphezulu. Oku kuyakukhusela iinkuni kubumanzi kwaye kuvumela nokulungiswa okukhuselekileyo kokutya.
Varnish umphezulu. Ivanishi yindawo efanelekileyo yokugxotha amanzi kwaye ikwabonelela ngokhuseleko kwi-UV. Uya kudinga isanti kwaye ufake idyasi rhoqo ngonyaka.
Beka uphahla okanye umthunzi ngaphezulu kwekhawuntari yakho yeenkuni. Unokufuna ukuqwalasela ikhava xa ingasetyenziswa.
I-Quartz lilitye lendalo elidityaniswe ne-polyester resins enokusetyenziswa ngaphandle ukuba ikhuselekile phantsi komthi. Ukuboniswa rhoqo lilanga ngokuthe ngqo kunokubangela ukusabela kweekhemikhali kwi-quartz enokuthi icime imibala kwaye inokubangela nokuqhekeka kweenwele kumphezulu.
Kwicala lokudibanisa nakuphi na ukuchitheka ku Imiphezulu yeetafile zekartz inokucocwa ngokulula kwaye xa ifakwe kwindawo efanelekileyo akukho nkathalo ikhethekileyo iyafuneka. Ekubeni i-quartz ayinayo i-porous ayifuni ukutywinwa njengezinye iindidi zee-countertops.
I-countertop yangaphandle ye-countertop yinto efanelekileyo yokukhetha ikhitshi yangaphandle. Kuyamelana nobushushu ukuze ikwazi ukumelana nezinto kunye nemisebenzi yokulungiselela ukupheka. Ungabeka ipani okanye imbiza eshushu ngaphezulu kwetheyitheli elingaphandle ngaphandle kokulimaza okanye ukonakalisa umphezulu.
Imikrwelo yelitye lesepha kunokuba lula, nangona kunjalo imikrwelo kulula ukujongana nayo. Unako ukukrwela ilitye lesepha ngaphandle komzamo omkhulu.
Enye into engalunganga kukudyobha. Amanzi, ioyile, kunye nokuprintwa kweminwe kungonakalisa umphezulu welitye lesepha elingatywinwanga. Ngelixa ezi zinokuhlanjwa, abanye abantu bayazijonga imiphezulu yeetafile zentsimbi ukugcinwa okuphezulu ngenxa yoku.
Insimbi engenasici ayisoloko isetyenziselwa indawo yangaphandle. Kungenxa yokuba, inye, inokuba shushu kakhulu xa ivezwe elangeni. Kwakhona, kubonakala kakhulu, ngoko umphumo welitha elangeni sisizathu sokuba le nto ingathathwa njengenketho efanelekileyo kwi-countertop yangaphandle.
Insimbi engenasici yinto elungileyo ukuba ujonge ukwenza ukubukeka okugudileyo kunye nokuncinci kwegumbi. Yinto eqhelekileyo kuyilo lwanamhlanje. Kulula kakhulu ukucoceka nokugcina, enokudibanisa ikhitshi kodwa ikwajongwa njengengxolo. Kunzima kakhulu ukubeka isitya okanye isitya kwitafile yentsimbi engenazintsimbi ngaphandle kokwenza ingxolo edangazelayo.
Ukuba uyafuna imiphezulu yeetafile steel stainless ekhitshini lakho elingaphandle, qiniseka ukuba uzibeka apho zingadanga ngqo elangeni. Unako ukubeka uphahla, i-awning, okanye olunye uhlobo lomthunzi phezu kwe-countertop yakho yensimbi engenasici. Isandi setafile yentsimbi engenanto ayisiyonto inkulu ekhitshini elingaphandle njengoko, kuba indawo ingumoya ovulekileyo isandi siphela ngokukhawuleza.
Ikhitshi elingaphandle eline-quartz emhlophe kunye nemiphezulu yeetafile.
Unophahla oluthile okanye ugqume ngaphezulu kwekhawuntari yakho yasekhitshini yangaphandle. Ayizukukhusela kuphela izinto zekhawuntari, kodwa iya kuyenza indawo yokusebenzela engcono. Unokuchitha ixesha elininzi ume kwi-countertop yakho ukuze ufune ukuzikhusela elangeni ukuze ukhulise intuthuzelo yakho.
Ipatio efihliweyo enezinto zokubala zegranite kunye noyilo lwamatye.
Ipatio efihliweyo enoyilo lwekhitshi lwangaphandle lwe-U olunezinto zokubala ezimhlophe zegranite.
Ipatio yedama egqunyiweyo enezinto zokubala zegranite kunye nemiqadi yokuxhasa amatye.
Uyilo olumiliswe U olunezinto zokubala eziphathekayo.
Imiphezulu yeetafile ezimnyama ezinamabala aluhlaza kunye neendonga ezisecaleni kwesileyiti kunye nokubuyela umva kwezitena.
Imiphezulu yeetafile zeflegi.
Izinto zokubala zesileyiti.
Imiphezulu yeetafile zethayile yokuhamba.
I-Pergola yagubungela ikhitshi elingaphandle elinomphezulu wekhonkrithi kunye nethayile kaMoses.
Imiphezulu yeetafile zekartz ezimnyama nezimhlophe.
Umbono olungileyo woyilo kukubandakanya indawo ekumaqhuqhuva kuyo pergola . Iya kubonelela ngomthunzi ukugcina ubuso betafile yakho ipholile, kodwa isaza kuvumela ukukhanya kwendalo kunye nomoya ngaphakathi.
Umama wengoma zomyeni
oceba iqela le-bachelorette
Ikhitshi elimhlophe lelizwe
ukuba ubhale ntoni kwikhadi lomtshato
izipho ezilungileyo kakhulu zonyaka omnye
Ukulungiswa kwakhona kwesoftware